ငွေထုပ်ကြီးပေါ်မှာ ထိုင်နေရပြီး ထမင်းငတ်နေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ - Lucky9
Homepage / Knowledge / ငွေထုပ်ကြီးပေါ်မှာ ထိုင်နေရပြီး ထမင်းငတ်နေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ
ငွေထုပ်ကြီးပေါ်မှာ ထိုင်နေရပြီး ထမင်းငတ်နေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ
By Ha ZawPosted on October 9, 2019
ရခိုင်မှာထွက်ရှိတဲ့သဘာဝဓာတ်​​ငွေ့ကို​ရောင်းဖို့ ၂၀၀၈-ခုနှစ်​မှာ တရုတ်​နဲ့ နှစ်​၃၀စာချုပ်​ချုပ်​ခဲ့တယ်။ ဓာတ်​​ငွေ့ပိုက်​လိုင်း​ဟာ(၂ – ၆-၂၀၁၃)မှာပြီးလို့ (၂၁ – ၁၀-၂၀၁၃)​မှာစတင်​ပို့လွှတ်​ခဲ့တယ် ။ ​ တစ်​နှစ်​မှာသဘာဝဓာတ်ငွေ့(၁၂)ဘီလီယံကုဗ​ပေအထိပေးပို့နိုင်​တယ်။
ရခိုင်ကမ်းလွန်ရှိဓာတ်ငွေ့သိုက်မှ ကုဗ​ပေသန်း၁၀၀ကို မြန်မာအတွက်ရောင်းပေးလို့ ကျောက်​ဖြူ၊ /ကျောက်​ဆည်​/​တောင်​သာမြို့တွေမှာ စက်​ရုံသုံးရုံတည်​​ဆောက်​ပြီးလျှပ်​စစ်​ထုတ်​ယူတယ်.။ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနှင့် အတူတည်ဆောက်တဲ့ ရေနံပိုက်​လိုင်းဟာ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ ပြီးစီးခဲ့ပြီး (၂ – ၅ -၂၀၁၇)မှာ စတင်​​ပို့လွှတ်​ခဲ့တယ်။ တနှစ်မှာ ​ရေနံတန်​ချိန်​ ၁၃.၆သန်းခန့်​ ပို့​ပေးတယ်..။ ​ကျောက်​ဖြူ​ ရေနံပိုက်​လိုင်းနှင့်ရွှေသဘာဝဓာတ်​​ငွေ့မှ နှစ်​စဉ် အ​မေရိကန်​​ဒေါ်လာ(၂)ဘီလျံခန့်ရရှိတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ရောင်းချပေးမယ့် Essar Group A2 နဲ့ L လုပ်ကွက်တွေမှ ထွက်တဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ၁၃ ထရီလီယံ ကတော့ ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းမှု မပြီးစီးသေးလို့ ထုတ်ယူခြင်းမပြုသေးတာဖြစ်တယ်…။ ၁၉၉၈/၂၀၀၀မှ စတင်လို့ မုတ္တမ ပင်လယ်ကွေ့ရှိ ရတနာ၊ ရဲတံခွန်လုပ်ကွက်မှ သဘာဝ ဓာတ်​​ငွေ့ကို ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောင်းတာ တစ်​နှစ်​ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ဘီလျံ နီးပါးရရှိတယ်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်မှစ၍နေ့စဉ် ဇောတိကလုပ်ကွက်အသစ် M-9 မှ ဓာတ်ငွေ့ သန်း၃၀၀ကို ထုတ်ယူတယ်.။ လက်ရှိကာလမှာ ကုန်းတွင်းလုပ်ကွက်ပေါင်း( ၆၅)ခု၊ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် (၅၃)ခုရှိသလို လုပ်ကွက်အသစ် (၁၈)ခုမှာလည်း စမ်းသပ်ရှာဖွေတူးဖော်မှုများပြုလုပ်နေတယ်.။
ဓာတ်ငွေ့ရောင်းရငွေများ ဒေါ်လာသန်းထောင်ချီ ပျောက်ဆုံးနေတယ်။ ကြေးနီ၊ ရွှေ၊ ကျောက်စိမ်း၊ ခနောက်စိမ်း၊ ရှားပါးဓာတ်သတ္တု (Rare Earth)ကျွန်းသစ်စတဲ့ သယံဇာတများကို ဘယ်လိုအသုံးချသလဲ…? ပမာဏများပြားလှတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ရောင်းချလို့ရတဲ့ ဒီငွေတွေ ဘယ်နေရာသို့ ဘယ်ခြေထောက်နဲ့ ထွက်သွားသလဲ…? (နိင်ငံတော်ဘဏ္ဍာထဲမရောက်ပါ)
မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း(MOGE)ကို တပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့ ဦးပိုင်(UMEHL)နြဲ့ မန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း(MEC)တို့က နှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းချူ ပ်ထားပါတယ်.။ ဦးပိုင်(UMEHL) နှင့် MEC လုပ်ငန်းစုများကို တပ်မတော်စစ်ရေးချုပ်နဲ့ စစ်ထောက်ချုပ်တို့က ထိန်းချူပ်ထားပါတယ်..။ (သူ့ရဲ့အထက်မှာကာချုပ်ရှိပါတယ်) လုပ်ကွက်တစ်ခုကို အသုံးချရုံမျှနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်သလို မီတာခကိုဈေးနှုန်းချိူ သာစွာသုံးစွဲနိုင်ပါတယ် ။
ပြည်သူလူထုအများစုမှာကောင်းကျိုးမခံစားရပါ ။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မီတာခတက်လို့အော်နေကြသူတွေ ဒါတွေများများသိအောင်လုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်.… နိုင်​ငံ​တော်​ရဲ့ဘဏ္ဍာ ယို​ပေါက်​ကို ဖာ​ထေးပြီး သူခိုးကြီးများလက်မှ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာများကို ပြည်သူတွေရရှိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်…။ မြန်မာ့သယံဇာတတွေဟာ အများအတွက်မဖြစ်ပဲ လူယုတ်မာတစ်စုအတွက်သာဖြစ်နေတာကို သတိပညာဖြင့်ကြည့်ပါကြ မင်တွေ့နိုင်ပါတယ်… အမိမြေမှာ သစ္စာပန်းများ ပွင့်လန်းနိုင်ပါစေ။
အရှင်တေဇနိယ(မန်းတောင်ခြေ) ဖေ့ဘုတ်အကောင့်မှ ကူးယူကိုးကား-ကုသသမဂ္ဂအစီရင်ခံစာများ
credit ; baganthar
ရခိုငျမှာထှကျရှိတဲ့သဘာဝဓာတျငှကေို့ရောငျးဖို့ ၂၀၀၈-ခုနှဈမှာ တရုတျနဲ့နှဈ၃၀စာခြုပျခြုပျခဲ့တယျ။ ဓာတျငှပေို့ကျလိုငျးဟာ(၂ – ၆-၂၀၁၃)မှာပွီးလို့ (၂၁ – ၁၀-၂၀၁၃)မှာစတငျပို့လှတျခဲ့တယျ ။ တဈနှဈမှာသဘာဝဓာတျငှေ့(၁၂)ဘီလီယံကုဗပအေထိပေးပို့နိုငျတယျ။
ရခိုငျကမျးလှနျရှိဓာတျငှသေို့ကျမှ ကုဗပသေနျး၁၀၀ကို မွနျမာအတှကျရောငျးပေးလို့ ကြောကျဖွူ၊ /ကြောကျဆညျ/တောငျသာမွို့တှမှော စကျရုံသုံးရုံတညျဆောကျပွီးလြှပျစဈထုတျယူတယျ.။ ဓာတျငှပေို့ကျလိုငျးနှငျ့ အတူတညျဆောကျတဲ့ ရနေံပိုကျလိုငျးဟာ၂၀၁၄ခုနှဈမှာ ပွီးစီးခဲ့ပွီး (၂ – ၅ -၂၀၁၇)မှာ စတငျပို့လှတျခဲ့တယျ။ တနှဈမှာ ရနေံတနျခြိနျ ၁၃.၆သနျးခနျ့ ပို့ပေးတယျ..။ ကြောကျဖွူ ရနေံပိုကျလိုငျးနှငျ့ရှသေဘာဝဓာတျငှမှေ့ နှဈစဉျ အမရေိကနျဒျေါလာ(၂)ဘီလြံခနျ့ရရှိတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံကို ရောငျးခပြေးမယျ့ Essar Group A2 နဲ့ L လုပျကှကျတှမှေ ထှကျတဲ့ သဘာဝဓာတျငှေ့ ၁၃ ထရီလီယံ ကတော့ ပိုကျလိုငျးသှယျတနျးမှု မပွီးစီးသေးလို့ ထုတျယူခွငျးမပွုသေးတာဖွဈတယျ…။ ၁၉၉၈/၂၀၀၀မှ စတငျလို့ မုတ်တမ ပငျလယျကှရှေိ့ ရတနာ၊ ရဲတံခှနျလုပျကှကျမှ သဘာဝ ဓာတျငှကေို့ ထိုငျးနိုငျငံကိုရောငျးတာ တဈနှဈ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂ဘီလြံ နီးပါးရရှိတယျ။ ၂၀၁၃ခုနှဈမှစ၍နစေ့ဉျ ဇောတိကလုပျကှကျအသဈ M-9 မှ ဓာတျငှေ့ သနျး၃၀၀ကို ထုတျယူတယျ.။ လကျရှိကာလမှာ ကုနျးတှငျးလုပျကှကျပေါငျး( ၆၅)ခု၊ ကမျးလှနျလုပျကှကျ (၅၃)ခုရှိသလို လုပျကှကျအသဈ (၁၈)ခုမှာလညျး စမျးသပျရှာဖှတေူးဖျောမှုမြားပွုလုပျနတေယျ.။
ဓာတျငှရေ့ောငျးရငှမြေား ဒျေါလာသနျးထောငျခြီ ပြောကျဆုံးနတေယျ။ ကွေးနီ၊ ရှေ၊ ကြောကျစိမျး၊ ခနောကျစိမျး၊ ရှားပါးဓာတျသတ်တု (Rare Earth)ကြှနျးသဈစတဲ့ သယံဇာတမြားကို ဘယျလိုအသုံးခသြလဲ…? ပမာဏမြားပွားလှတဲ့ ဓာတျငှရေ့ောငျးခလြို့ရတဲ့ ဒီငှတှေေ ဘယျနရောသို့ ဘယျခွထေောကျနဲ့ ထှကျသှားသလဲ…? (နိငျငံတျောဘဏ်ဍာထဲမရောကျပါ)
မွနျမာ့ရနေံနှငျ့သဘာဝဓာတျငှလေု့ပျငနျး(MOGE)ကို တပျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျးမြားဖွဈတဲ့ ဦးပိုငျ(UMEHL)နွဲ့ မနျမာ့စီးပှားရေးကျောပိုရေးရှငျး(MEC)တို့က နှဈပေါငျးမြားစှာထိနျးခြူ ပျထားပါတယျ.။ ဦးပိုငျ(UMEHL) နှငျ့ MEC လုပျငနျးစုမြားကို တပျမတျောစဈရေးခြုပျနဲ့ စဈထောကျခြုပျတို့က ထိနျးခြူပျထားပါတယျ..။ (သူ့ရဲ့အထကျမှာကာခြုပျရှိပါတယျ) လုပျကှကျတဈခုကို အသုံးခရြုံမြှနဲ့ တဈနိုငျငံလုံး လြှပျစဈမီးသုံးစှဲနိုငျသလို မီတာခကိုဈေးနှုနျးခြိူ သာစှာသုံးစှဲနိုငျပါတယျ ။
ပွညျသူလူထုအမြားစုမှာကောငျးကြိုးမခံစားရပါ ။ သဘာဝဓာတျငှရေ့ောငျးလို့ရတဲ့ငှတှေနေဲ့ တိုငျးပွညျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအမြားကွီးလုပျနိုငျပါတယျ။ မီတာခတကျလို့အျောနကွေသူတှေ ဒါတှမြေားမြားသိအောငျလုပျကွဖို့လိုပါတယျ.… နိုငျငံတျောရဲ့ဘဏ်ဍာ ယိုပေါကျကို ဖာထေးပွီး သူခိုးကွီးမြားလကျမှ ပွညျသူ့ဘဏ်ဍာမြားကို ပွညျသူတှရေရှိအောငျလုပျရမှာဖွဈပါတယျ…။ မွနျမာ့သယံဇာတတှဟော အမြားအတှကျမဖွဈပဲ လူယုတျမာတဈစုအတှကျသာဖွဈနတောကို သတိပညာဖွငျ့ကွညျ့ပါကွ မငျတှနေို့ငျပါတယျ… အမိမွမှော သစ်စာပနျးမြား ပှငျ့လနျးနိုငျပါစေ။
အရှငျတဇေနိယ(မနျးတောငျခွေ) ဖဘေု့တျအကောငျ့မှ ကူးယူကိုးကား-ကုသသမဂ်ဂအစီရငျခံစာမြား
ဝမ်းနည်းပြီး စိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းတဲ့ ချိန်းတွေ့ကြခြင်းမှ ဖြစ်ရပ်
တစ်ကယ်တမ်းကြတော့ ရေစက်ရှိလို့ ဆုံတာထက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဝဋ်ကြွေးဆပ်ဖို့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ
ပိုက်ဆံအိတ် (သို့) ငွေသေတ္တာ ထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ လာဘ်ပိတ်စေတဲ့ အရာတွေ …
Previous post “ဘွဲ့ရရင် ဘာအလုပ်လုပ်ကြမလဲ?” – ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ)
Next post မင်းသမီးလေးငိုပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ပုံစံ သရုပ်ဆောင်ပြနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ သမီးလေး